Katalọgụ: Airwoods N'uko Ikuku Dị Ọcha
1. MFD (Intense Field Dielectric) teknụzụ nzacha：
99.99% adsorption arụmọrụ megide PM2.5. Nzọụkwụ 3 nzacha. Nzacha ahụ (buru ibu karịa PM2.5) site na ntinye mbụ. Obere ihe (≤PM2.5) gafere site na nzacha mbu nke 12V na-ebu ikike na ntanye mgbasa. N'ikpeazụ, a ga-etinye ihe ndị ahụ ebubo na IFD iyo.
IFD filtration na-arụ ọrụ ụkpụrụ ：
An ifD ikuku nyo-eji ojiji nke electric ugbu a na-enyere mwepụ nke particulate mmetọ si ikuku. Ka anyị kewaa usoro ahụ na usoro atọ dị iche.
1. usingmịnye ọkụ eletrik n'ime ikuku ：
Nzọụkwụ mbụ n'ime usoro ịdị ọcha ikuku ifD na-enye ikuku ikuku ikuku. Nke a yiri usoro n'ime Igwe Ionizer. Ozugbo a na-ewebata ọkụ eletrik na ikuku, ndị na-emetọ ikuku na-ese n'elu ikuku na-eburu ụgwọ a ma na mmetụta ha bụrụ ion ebe ha na-ebu ụgwọ dị mma ma ọ bụ na-adịghị mma na ha.
2. Na-agafe ikuku site na nzacha ：
Ikuku na-ebu ihe ndị a na-emetọ emetọ na-asọba na ntanetị ifD. IfD iyo dị ka mpempe akwụkwọ na mmanụ a honeyụ. Ngwurugwu a bụ n'ezie ọwa maka ikuku ka ọ na-asọ ma bụrụ nke polymer.
3. Capture nke mmetọ site nyo ：
N'etiti ọtụtụ ahịrị ndị ikuku polymer enwere mpempe akwụkwọ nke electrodes. Ndị a mkpa electrode Ibé akwụkwọ n'ịwa a siri ike electric ubi nke bụ ike nke na-adọta obere particulate mmetọ nke ugbu a na ebubo. Ebe ọ bụ na a na-ebo ebubo niile, ha na-adọrọ mmasị n'ụzọ dị mfe na electrodes na ka ha na-akwaga na mpụga, ha jidere ha na mgbidi nke ọwa ha na-agafe.
IFD nzacha Uru:
Filterdị nhazi nke enwere ike iji ya tụnyere ihe nzacha ifD bụ nzacha HEPA a maara nke ọma. HEPA na-anọchite anya nnweta ikuku dị elu. A na-ahụta ihe nzacha HEPA dị ka akara edo edo ma a bịa na nzacha ikuku taa.
Isi ihe dị iche n’etiti HEPA na ifD bụ na a ga-edochi ndị na-ehichapụ HEPA ozugbo ha jiri ha. ifD nzacha na aka nke ọzọ ga-eji dị ka ihe na-adịgide adịgide iyo. Naanị ihe achọrọ bụ ịsacha ha kwa ọnwa isii ma ọ bụ karịa ma ha alaghachi na steeti ha.
Nke a nwere uru doro anya maka ndị na-eri ahịa ebe ọ bụ na anyị ekwesịghị iwepụ ọnụ ahịa nzacha dochie kwa ọnwa ole na ole jiri nzacha HEPA ọdịnala.
Otu moto nwere igwe ikuku abuo, ikuku abuo iji nye ikuku zuru oke na obere mkpọtụ.
3. UV Oriọna + Photocatalyst Sterilization Technology:
Igwe ọkụ UVC nke nje germicidal na-eme ka ihe ọkụ ọkụ dị na fotocatalytic (dioxygentitanium oxide) iji jikọta mmiri na oxygen na ikuku maka mmeghachi omume nke fotocatalytic, nke ga-ewepụta ngwa ngwa nke ìgwè ion germicidal dị elu (ion ion hydroxide, ion super superhydrogen, ion ion oxygen, hydrogen peroxide ion, wdg). Njirimara oxidizing na ionic nke ihe ndị a na-ekpo ọkụ ga-emebi gas na isi ísì ngwa ngwa, belata ihe ndị ahụ kwụsịrị, ma gbue microbial contaminants dị ka nje, bacteria, na ebu.
4. Dị iche iche nwụnye Nhọrọ:
Nke gara aga: Jikọtara Ikuku Ijikwa Units
Osote: All DC Inverter VRF Ntụ oyi
Hepa Uv Ikpochapu ikuku
Uv Ikpochapu Ngwaahịa